वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निकोलस पाण्डे सहित बहुमत सिटमा सिंह प्यानल नै विजयी (सूचिसहित)
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको चुनावबाट संस्थापनमा पकड रहेको पूर्व अध्यक्षहरु समर्थित पक्षले नै जित हासिल गरेको छ ।
अध्यक्षमा देउजाले ६६ मत मात्रै पाएका छन् भने काँग्रेस निकट नै मानिने पुरुषोत्तम मानन्धरले लाजमर्दाे भोट (७ मात्रै) पाएका छन् ।
वरिष्ठ सहित उपाध्यक्षहरुमा को को विजयी ?
त्यस्तै, प्रदेश उपाध्यक्षहरुमा वाइडी प्यानलले हार व्यहोरेको छ ।
७ प्रदेश मध्ये ५ नम्बर प्रदेशबाट मात्र वाइडी प्यानलका एकजना विजयी बन्न सफल बने । जसमा प्रदेश नम्बर–१ बाट धिरेन्द्र दाहाल, २ बाट सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ३ बाट पेम्बा लामा शेर्पा, ४ बाट राजेन्द्र पहाडी, ५ बाट टोपबहादुर रायमाझी, ६ बाट रत्न बहादुर खड्का र ७ बाट टेकबहादुर सेटी विजयी बनेका हुन् ।
एफक्यान सञ्चार डेस्क प्रमुख रामचन्द्र गिरीले दिएको जानकारी अनुसार नयाँ बानेश्वर ब्यांकेट थापा गाउँमा साँझ ४ बजे सपथ समारोह आयोजना गरिएको हो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ चुनावः चारपक्षीय भिडन्त, को बन्ला विजेता ? जो जिता वही सिकन्दर !
सर्वसम्मतिबाट आएका पूर्व अध्यक्षहरु यसरी बने सफल, यस्तो गरे योगदान, तर चुनावी मैदान अपनाउँदा हुन पुग्यो क्षति !
विजयीहरुको पूर्ण विवरण